Ihe dị ka otu afọ gara aga, anyị nwere onye ahịa kpọrọ anyị na ha enweghị obi ike. Ha kpochapụrụ onye ọrụ na sistemụ ha na onye ọrụ ahụ nwere ọdịnaya niile ka ehichapụ ọdịnaya ahụ. Ọdịnaya ahụ apụla. Ọnwa ole na-arụ ọrụ iji mejupụta saịtị ahụ… niile abanyela na obi. Ntinye aka anyị bụ iji wulite isiokwu ha, ọ bụghị ijikwa nnabata na mmejuputa ya. N'ihi ya, anyị nwere naanị